ओलीले मोदीलाई सोधेका थिए,अब नाकाबन्दी लगाउनुहुन्छ कि हुन्न ?::NepalBhaskar
ओलीले मोदीलाई सोधेका थिए,अब नाकाबन्दी लगाउनुहुन्छ कि हुन्न ?
काठमाडौं,२६ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका अवसरमा भारत सरकारले गरेका रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग र जलमार्ग विकासमा सहयोग गर्नेलगायतका घोषणा नेपालको सीमासम्म रेलमार्ग पुर्‍याउने उद्घोष गरेको चीनलाई जवाफ भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले टिप्पणी गरेका छन्।
ओलीको भारत भ्रमणकै क्रममा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो । यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले निकट भविष्यमा हुने आफ्नो नेपाल भ्रमणका अवसरमा शिलान्यास गर्ने योजना बनेकाले स्थगन गरिएको विदेश सचिव गोखलेलाई उद्धृत गर्दै उक्त दैनिकले लेखेको छ । यसमा नेपाली टोलीले पनि मौन समर्थन गरेका छन्। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।